N'ogbe PET onunu Cup Manufacturer na Supplier | Copak
PET mmanya onunu
KOPAK-PET mmanya iko. Anyị nwere ike ịmata site na aha ya na ihe bụ PET (Polyethylene Terephthalate), a na-etinyekarị ya na ngwugwu ihe ọverageụverageụ.
Gịnị kpatara anyị ji eji PET? Iko ihe a putara na 2000 na china. Ihe a, Polyethylene Terephthalate (PET), bu ihe eji eme enyi na ebe obibi, kristal doro anya nke oma maka odiwanye nma ma nwee ike inye ezigbo ogwugwu.
4. Ojiji: Ihe ọ drinksụ Coldụ na-a /ụ / ihe ọ /ụ /ụ / Ice cream / Milk / Tea / Kọfị / tii / ihe ọ Juụiceụ / Afụ / Cola Sample / Beer / Yard / Café / Wine / sundae / Mkpụrụ / Swiiti / Milkshake / Salad / Noodle
KOPAK-PET ihe ọ Cupụverageụ ihe ọ Cupụverageụ. Anyị nwere ike ịmata site na aha ya na ihe bụ PET (Polyethylene Terephthalate), a na-etinyekarị ya na ngwugwu ihe ọverageụverageụ.
COPAK PET ihe ọ Cupụverageụ ihe ọ Cupụverageụsiri ike, na-adịgide adịgide ma maa mma. Nwere ike ịmepụta ụdị ejiji ma ọ bụ nha ọ bụla. Anyị ebiela n’ọhịa a ọtụtụ afọ. Olu anyị dị na nke anyị dị ugbu a dịgasị iche. Nwekwara ike ịhọrọ site na katalọgụ anyị.
Zọ na a PET ihe ọ cupụ beụ ihe ọ cupụverageụfanye na mkpuchi ka ewepụtara iji mepụta igwe ihe eji eme ọtụtụ ihe zuru oke na ngwugwu ngwugwu. A na-akwadebekwa okporo ụzọ Takeaway. Enwere yaPET ihe ọ cupụ beụ ihe ọ cupụverageụ,, Mgbe ịnụ ụtọ ihe ọ yourụ yourụ gị, Naanị tụba ya na ntụ. Mana ọ bụ 100% recyclable.
Nke anyi PET ihe ọ Cupụverageụ ihe ọ Cupụverageụna-popularly-eji oyi na-atụ ubi dị ka ụlọ mmanya, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, na kọfị ụlọ ahịa, na Boba tii ụlọ ahịa gburugburu ụwa. COPAKPET ihe ọ cupụ beụ ihe ọ cupụverageụkwadoro 100% na ọkwa nri. All mmepụta Filiks na-okokụre na ájá-free ọcha ogbako wee gafere FDA / BRC / QS / SGS / LFGB / ISO9001 Asambodo.
Mkpado okpu: PET ihe ọ cupụ beụ ihe ọ cupụverageụ, Nri nri, merie mmeri uru, ihe ọ coldụ coldụ oyi.
Nke gara aga: Cup Milkshake
Osote: PITA Kọntaktị Cup
PET Cups na Lids ET PET Cups N'ogbe ET PET Deli Cups ET PET Milkshake Cup 、 PET Portion Cups with Lids ET PET Smoothies Cup 、 E Bipụtara PET Cups
PET mmanya ihe ọ Cupụ Cupụ